Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf ayaa soo dhoweysay xil ka qaadistii RW Kheyre iyadoo ku eedeysay… – Hagaag.com
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf ayaa soo dhoweysay xil ka qaadistii RW Kheyre iyadoo ku eedeysay…
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Aadan oo ah guddoomiyaha madasha xisbiyada midoobay ee Hiigsi ayaa soo dhoweysay xil ka qaadistii Rai’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo xukuumadiisa oo uu shalay Barlamaanka riday.
Xildhibaan Fowsiyo oo BBC Somali u warrantay, waxay ku eedeeysay Rai’isul wasaare Kheyre inuu hor-istaagnaa in ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah uuna doonayay inuu Soomaaliya ku celiyo doorasho dadban.
“Rai’isul wasaaraha marar badan oo uu hadlay waxaan hadalkiisa ka dhadhaminay inuu diidanaa in dalkaan doorasho dadweyne ay ka dhacdo,” ayay tidhi xildhibaan Fowsiyo.
Waxay Rai’isul wasaaruhu ku eedeysay inuu kasoo horjeestay oo uu muran galiyay sharciga doorashooyinka oo labada gole ay soo ansixiyeen madaxweynuhuna uu saxiixay, sharcigaas oo ah sharciga dalka lagu gaasriinayo doorasho qof iyo cod.
“Hadduu Rai’isul wasaaruhu hor istaagnaa wixii aan shan sano usoo diyaar garooobaynay oo waqti badan nooga lumay sugitaankooda, hadde waan ku qanacsanahay in nala ka hor leexiyo.
Xildhibaan Fowsiyo waxay sheegtay dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashada inay mas’uuliyaddooda qaaddayso xukuumada Kheyre, iyadoo sheegtay in sharuucda dalka ee la rabay in mar hore Barlmaanka la horgeeyo lagu haystay xafiiska Rai’sal wasaaraha.